Ny fanompoana no fivarotana vaovao | Martech Zone
Ny fanompoana no fivarotana vaovao
Asabotsy 15 Febroary 2014 Asabotsy 15 Febroary 2014 Tempolin'i Lavon
Nanatrika an Indianapolis AMA sakafo atoandro izay niresahan'i Joel Book momba ny Marketing to the Power of One. Ny fampisehoana nataony dia misy fampahalalana marobe momba ny fampiasana marketing nomerika hanompoana ny mpanjifa amin'ny fomba mahomby kokoa. Na dia marobe aza ny fandraisana an-tanana ny fandaharana dia nisy iray nifikitra tamiko. Ny hevitra hoe: manompo no fivarotana vaovao. Amin'ny ankapobeny, ny hevitra hoe ny fanampiana ny mpanjifa dia mandaitra kokoa noho ny manandrana mivarotra azy ireo tsy tapaka.
Ahoana no ampiharana izany amin'ny fampielezana mailaka mailakao? Mandefasa mailaka manampy izay manome tanjona manokana ho an'ny mpanjifanao. Ireto misy ohatra vitsivitsy:
Fampatsiahivana momba ny vokatra: raha azo ampiharina amin'ny vokatrao dia mandefasa mailaka fampahatsiahivana ho an'ny mpanjifanao rehefa akaiky ny mila mandidy indray na mividy refill.
Ampahatsiahivina ny fampatsiahivana ny lisitry ny fiantsenana: indraindray, ny mpanjifa dia mametraka zavatra ao anaty sariny miaraka amin'ny fikasana hividy, saingy tapaka fotsiny alohan'ny hahafahany mamita. Ny mailaka fitobiana efa nilaozana dia mety ho fomba fahalalam-pomba hampahatsiahivana azy ireo fa misy ny entana mbola ao ary hanamora ny fiverenan'ireo mpanjifa haingana ny famidinany.
Fampatsiahivana famerenana vokatra: ireo dia fampahatsiahivana mailaka mandresy fandresena handefasana amin'ny mpanjifa. Amin'ny alàlan'ny fandefasana dia mampahatsiahy ny mpanjifanao ianao mba hameno ny hevitra momba ny vokatra novidian'izy ireo vao tsy ela akory izay. Na izany aza, ny famerenana vokatra tsara dia mety hampiakatra ny fahatokisanao amin'ny maha orinasa anao ary hanome fahatokisana bebe kokoa ny mpanjifanao amin'ny vokatrao.
Raha tsy nanampy ireo mailaka ireo ianao ho ao anatin'ny programa marketing mailaka anao, maninona raha? Izy ireo dia azo hatsangana handefasana azy ireo miorina amin'ny fihetsiky ny mpanjifa ary manompo ny mpanjifanao amin'ny fomba mahomby kokoa izy ireo, ary koa mitondra fidiram-bola fanampiny ho any amin'ny farany ambany. Toa toy ny dunk slam, sa tsy izany? Raha mila fanampiana amin'ny fampiharana ireo karazana mailaka ao amin'ny programa mailaka ankapobeny ianao dia miangavy anao manatona an'i Delivra anio.
Inona avy ireo ohatra mailaka hafa lazainao manompo ny mpanjifa?
Tags: kalesy fiantsenana nilaozanamailakamailaka Marketingfampahatsiahivana ny vokatraantsinjarany
Ny lasa, ankehitriny ary ny hoavin'ny marketing amin'ny Internet
17 Mey 2014 tamin'ny 7:00 hariva
Ny fanampiana ny mpanjifanay dia mety ho mora na mety ho raharaha be, miankina amin'ny fahitana azy. Hitako hatrany fa ny fanampiana ny mpanjifako dia orinasa iray tena mahasoa. tsy eo amin'ny resaka fidiram-bola ihany, fa eo amin'ny lafiny ara-tsosialy koa.
Ary amin'izao andro izao, miaraka amin'ny habetsaky ny gazety izay iainan'ny mpanjifa ratsy ao amin'ny media sosialy, dia misy dikany bebe kokoa noho ny hatramin'izay ny fanompoana tsara ny mpanjifanay. Tsy fantatrao mihitsy hoe iza no mahalala hoe iza na iza no mety ho fantsona miverina amin'ny fahazoana mpanjifa vaovao.